"Murume Akatetepa" Anosunungura Trailer Nyowani - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau "Murume Akatetepa" Anosunungura Trailer Nyowani
"Murume Akatetepa" Anosunungura Trailer Nyowani
yakanyorwa na Waylon Jordan January 3, 2018
Izvo zvese zvakatanga ne Creepypasta; ipapo yakave ngano iyo neimwe nzira yaikurudzira mhosva muzita rayo. Pamwe zvaingova zvega zvega kuti Murume Akatetepa aine muviri wake murefu, mutete, asina chimiro, uye zvinangwa zvine mutsindo aigona kupinda munzira huru.
Hazvishamisi ipapo, kuti 2018 ichaona inozivikanwa monster mutambi Javier Botet kupa sutu nhema kutyisidzira vechidiki vachitungamirwa naSylvain White (Tora iyo Yadhi).
Botet inosanganiswa naJoey King (Kubvumirana) Julie Goldani Telles ("Bunheads"), Jaz Sinclair (Kana Bazi Rikatsemuka), Uye nechaunga chevamwe vatambi vechidiki sevanozivikanwa vevabatwa, uye ikozvino isu pakupedzisira tave netrailer.
Yakazadzwa nemifananidzo inovhiringidza uye kamwechete chiitiko chekutambudzika kweziso rakakomba, tirera inoisa toni yegehena rimwe remufirimu. Izvo zvakakwana zvakakwana kuti tigare pamucheto wezvigaro zvedu uye titeerere.
Murume mutete sill inoita nzira yake mumitambo May 18, 2018 pamwe nekuparadzirwa naSony Mifananidzo. Tarisa uone iyo tirera pazasi uye uzvigadzirire iwe kumuka kweSlender Man!
Javier BotetMurume muteteWaylon Jordan
Blumhouse's 'Chokwadi kana Kushinga' Trailer Inotora Mitambo Yemapati -Yakanyanya- Zvakanyanya
[Teaser Trailer] 'Ngirozi' - Iyo Nyowani Inotyisa-Inonakidza, Iri Kuuya Munguva pfupi.
'Sam & Mattie Gadzira Zombie Movie' Kunze ...